Kacha mma ahịa ka Detuo na eToro Eprel 2021 | Full Beginnners Nduzi
Top 5 Ndị ahịa kacha mma na eToro 2021 Mụta 2 Nduzi Azụmaahịa!
Ndị ahịa kachasị mma na eToro, ebe otu narị otu narị ndị ahịa na-eme mkpọtụ na-eti mkpu ma na-akwa emo na nnukwu ihuenyo na olulu ahịa adịghị ahụkarị ụbọchị ndị a, ebe ọtụtụ mmadụ na-azụ ahịa n'ịntanetị.
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọchụnta ego ọhụụ na - achọta ụkwụ gị, ị ga - enwe ike i mimomi ahịa nke ndị ọganiihu na - aga nke ọma, ndị na - azụ ahịa oge niile. A na-enweta ihe omuma ahia a site na iji ihe omuma ohuru a na-akpọ ahia ahia.
Iomi otu onye na-ere ahia pụtara na ị gaghị arụ ọrụ ụlọ ọ bụla n'onwe gị. N'ezie, nke ahụ apụtaghị na ọ naghị enwe ihe egwu ọ bụla - nke ahụ bụ ụdị azụmaahịa. Ka o sina dị, eToro na-achịkwa ahịa azụmaahịa - usoro ikpo okwu nke bụzi ebe obibi maka ndị ahịa 12 nde.
Iji nyere gị aka igosi gị ụzọ ziri ezi, wechila ndu na ndi ahia 5 kacha mma na eToro. Nke a na-ekpuchikwa ihe ịchọrọ ịma banyere azụmaahịa nnomi iji bido ma bụrụ nke dị oke mkpa - ihe ịkwesịrị ịme n'ịhọrọ onye na-azụ ahịa n'oge a nke na-ezute ebumnuche itinye ego gị ogologo oge.
Top 5 Ndị ahịa kacha mma na eToro 2021
Site na ụdị ndị ahịa dị iche iche dị iche iche ịhọrọ, ọ nwere ike isi ike ikpebi ndị na-etinye ego eToro ịchọrọ idetuo ma nweta nghọta karịa. Ọ nwere ike ịdị ka ihe doro anya ị ga - eme bụ ịhọrọ onye na - azụ ahịa nke nwere ọtụtụ nnakọcha akwụkwọ n'okpuru eriri ha. Mana, mgbe ị na-eburu n'uche ihe ị nwere mmasị dị ka onye na-azụ ahịa, ụfọdụ ndị ọchụnta ego kacha mma na eToro nwere ike na-enwu n'ụzọ ndị ọzọ.
N'iburu nke a n'uche, anyị ejikọgo 5 nke ndị ahịa kachasị mma na eToro 2021 ọnụ, yana obere ozi na nke ọ bụla.
E nwere ọtụtụ puku ndị ahịa na-ere ahịa nke ọma na eToro, mana Jay Edward Smith bụ ugbu a bụ otu n'ime ihe kachasị depụta na n'elu ikpo okwu. Site na 12,381 copiers na nloghachi nke 24.61% na ọnwa iri na abụọ gara aga - ndị ọrụ eToro na-achọsi ego ahụ ike.
A obere ihe ọmụma banyere oge a eToro ọorụ - Jay Edward Smith bụ afọ 31 ma dabere na Basingstoke, England. Ọ bụbu onye egwuregwu egwuregwu, onye njikwa na-ahụ maka njikwa, yana onye nhazi nhazi yana ọdịmma na ahịa ego, crypto, logistics, akụnụba na teknụzụ - ịkpọ aha ole na ole.
Onye ahia a nwere ntụnye akwụkwọ kacha nta nke $ 500, mana akwadoro $ 2,000 +. Ọ na-atụ aro ka idetuo ahia ya afọ 2 ma ọ bụ karịa iji nweta ihe kachasị mma na pọtụfoliyo ya.
N'ime ihe karịrị $ 5 nde nke ihe okike n'okpuru njikwa, Jay bụ 35.20% na-acha akwụkwọ ndụ na 2020 (rue July) na na 2019 - o weghachitere nloghachi nke 52.32%.
Ka anyị lelee ngwa ngwa ihe ndozi azụmaahịa Jay Edward Smith ugbu a:
Site na njirimara dị ize ndụ nke 5 - atụmatụ ntinye ego nke onye ahịa a gụnyere:
Iji ntinye aka kacha nta (x2 kachasị)
Iji nyocha nyocha, nyocha na nke mmetụta
Isi ahia bụ ebuka na mkpuchi
Akara Egwu: 5
* Ọ bụrụ n ’itinye $ 1,000 n’afọ gara aga, ị ga-enweta uru nke $ 281.00
Mepee Akaụntụ Ugbu a
Onye ahia a nwere nnukwu ihe 9,807 copi ma nweghachi nlọghachi nke 6.38% na ọnwa 12 gara aga. N'ihe karịrị $ 5 nde akụ n'okpuru njikwa na eToro, Olivier nwere atụmatụ ịzụ ahịa dị ala na usoro iwu njikwa ego siri ike yana ihe mgbaru ọsọ nke 1% kwa ọnwa.
Olivier abụwo onye ọkachamara nchịkọta ego maka ihe karịrị afọ iri abụọ ma ọ bụ n'ezie otu n'ime ndị na-ewu ewu na-ewu ewu mgbe ọ bịara Forex trading, ọ kachasị. Ọ na-amụ nyocha teknụzụ yana isiokwu gbasara ego, yana akụkọ banyere itinye ego.
Na 2019, onye ahia a mere nloghachi nke 8.40%. N’ọnwa isii mbụ n’afọ 2020, ọ nọ na-acha akwụkwọ ndụ 2.27%. Pọtụfoliyo Olivier Jean Andre Danvel bụ nke:
Iji a kacha nta oyiri nkwanye nke $ 500 na n'ihe ize ndụ larịị 2, Olivier bụ oké nhọrọ ma ọ bụrụ na i nwere mmasị karịsịa na Forex trading.
Akara Egwu: 1
* Ọ bụrụ n ’itinye $ 1,000 n’afọ gara aga ị ga-enweta uru nke $ 65.00
Jeppe bụ onye ọzọ zụrụ ahịa na eToro na 8,360 copi n'elu ikpo okwu. N'ime ọnwa 12 gara aga, ọ hụla nlọghachi nke 23.19%. Na 2019, Jeppe nwere ezigbo nloghachi nke 45.55% ma bụrụ nke kachasị na ọnwa na-acha akwụkwọ ndụ ọnwa.
Ka ọ na-erule etiti afọ 2020, ọ nọ na-acha akwụkwọ ndụ site na 8.33%. Nzụlite ya nwere ọrụ ndụmọdụ njikwa, na-adụ ọdụ ụfọdụ ụlọ akụ kachasị ama ama na ụwa. O nwere asambodo nke nna-ukwu na ego na njikwa ya.
Jeppe bụ ọkwa dị ize ndụ 5 na atụmatụ ya gụnyere:
Na-eme atụmatụ dị mkpa
Na-amụ ihe na-ewu ewu n'ahịa si gburugburu ụwa
Na-eji hedging na diversification jikwaa Pọtụfoliyo ihe ize ndụ
Na-ezere itinye ego ebe enwere ike
Onye na-ere ahịa a na-ezere ngwa ngwa na ụgwọ dị elu, ọnọdụ dị mkpirikpi ma gbalịa idebe oge ahia na opekempe.
Nke a bụ nlele ngwa ngwa etu esiri mepụta Pọtụfoliyo azụmaahịa Jeppe:
Ọ bụ ihe amamihe dị na ya idetu ndị ahịa na-emeghe na osisi nke opekata mpe $ 300 opekata mpe iji hụ na ị nwere ike i mirroromi iwu ya dị ka-maka-dị ka.
* Ọ bụrụ n ’itinye $ 1,000 n’afọ gara aga ị ga-enweta uru nke $ 232.00
4. Heloise Greekff
Onye ahia ahia a nwere ihe copi 1,498 wee laghachi 26.39% na ọnwa iri na abụọ gara aga. Ka ọ na-erule ngwụsị nke 2019, Heloise Greeff weghachiri uru nke 20.19%. N'ime ọnwa isii mbụ nke 2021, onye ọchụnta ego a nwetara uru nke 17.74%.
Heloise nwere akara MBA na Mahadum Oxford ma bụrụ ọkachamara na ịzụ ahịa. Mana, o tinyekwara aka na 'ego gbanwere' (ETFs) na indices.
Pọtụfoliyo azụmaahịa nke Heloise Greeff dị ugbu a:
Offọdụ n'ime azụmaahịa azụmaahịa Heloise bụ ndị a:
Pharma na teknụzụ
Nkuzi igwe na nyocha oru
Gbasa ihe egwu, nweta ezigbo nlọghachi
Obere ego a tụrụ aro pere mpe bụ $ 1,000. Fọdụ n'ime itinye ego ya kachasị bụ Aalesforce.com (5.40%), Mastercard (5.36%), Microsoft (4.50%) na Visa (3.80%) ..
* Ọ bụrụ n ’itinye $ 1,000 n’afọ gara aga ị ga-enweta uru nke $ 290.00
Ọzọ ahia oyiri ahia na anyị na ndepụta bụ Teoh Khai Liang - na 7,740 copiers. N'ime ọnwa iri na abụọ gara aga, Teoh ahụla nlọghachi nke 12%. Onye na-ere ahia ahụ nwere ihe karịrị nde $ 55.92 maka akụ ya Na 2019 naanị, ọ laghachiri 46.65%. Ruo afọ a, nlọghachi ya na-anọdụ na 37.66% - nke buru ibu.
Teoh na-azụ ahịa ọtụtụ n'ọtọsị, yabụ ọ bụrụ n'ịchọrọ i toomi ya, ị ga-adị njikere ịmekọrịta òkè isi na-acha anụnụ anụnụ. N'ụzọ dị oke mkpa, ọ lekwasịrị anya ijide ọnọdụ ogologo oge.
Usoro a na-azụ ahịa nke a gụnyere:
Ntinye ego ogologo oge.
Ijide ebuka, belụsọ na mgbanwe ndị gbara ọkpụrụkpụ mere.
Ijide ebuka mgbe ahịa na-arị elu.
Buzụta ngwaahịa ma ọ bụrụ na ahịa agbada.
* Ọ bụrụ n ’itinye $ 1,000 n’afọ gara aga ị ga-enweta uru nke $ 599.00
Daysbọchị ndị a, tom, dick, na harry niile nwere ahịa ahịa - ịzụ ahịa site n'ụlọ ugbu a na ọkwa ụwa. Eziokwu ahụ bụ na onye ọ bụla - gụnyere ndị na-azụ ahịa mkpọsa, nwere ohere ugbu a na-akpọ 'ama egwuregwu nke ndị ọgaranya' dị mma.
Ma, ọ bụrụ na ị ka bụ onye ụjọ na-atụ ụjọ, ma ọ bụ na ị nwetụbeghị ụkwụ na ụwa nke itinye ego - mgbe ahụ idetuo azụmaahịa nwere ike ịbụ ihe kachasị mma ị megoro! Ọzọkwa, na ikekwe nke kachasị mkpa - ọ nwere ike ịbụ nnukwu ụzọ isi mụta ịzụ ahịa.
Ihe ndekọ akụkọ mgbasa ozi ọha na eze site n'aka ndị ahịa nwere ahụmahụ anọwo gburugburu ruo nwa oge n'ụdị profaịlụ ndị na-etinye ego. Echiche bụ, ị nwere ike ịgbaso onye na-azụ ahịa na ụdị echiche azụmaahịa yiri onwe gị, ma nweta ndụmọdụ n'okporo ụzọ n'ihi na ụfọdụ ndị na-etinye ego na -ekọrịta stats na eserese.
Nnukwu ihe dị na ahia ahia bụ na ọ bụ nnoo banyere ịkpata ego, karịa naanị ịdị na-akpa ọchị.
Onye na-ere ahịa nnomi nke ị kpebiri na ọ ga-eji nkà ha zụọ ahịa na nnọchite gị (yana onye ọ bụla ọzọ na-edegharị ha). Ihe niile ikwesiri ime bụ ikpebi ego ole ị ga - e copyomi. Nke a pụtara ego ole ka ị dị njikere itinye maka maka itinye ego na azụmaahịa ya.
Dika anyi kpuchiri na nkenke, ahia ahia na-enyere gi aka idetu ahia nke ndi ozo mkpebi, ka mma ma ọ bụ ka njọ. Dị ka ndị dị otú a, mgbe ị na-ahọrọ idetuo onye na-ere ahia - ma ha kpebie ịzụta, ọ pụtara na ị zụrụ kwa. Mgbe otu onye na-ere ahịa ahịa ahụ kpebiri ire, ị ree kwa. Kwesighi ime ihe na n'ikpeazụ - ị ga-azụ ahịa na ụzọ efu.
Detuo Mechanics Trading
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, usoro ọrụ ịzụ ahịa na-agbadata iji kenye otu akụkụ nke gị Pọtụfoliyo ahia na pọtụfoliyo nke ahụmahụ ahịa - nke oke gi
Ozugbo i kpebiri ndị ahịa ị ga-achọ idetuo na ole ị ga-achọ itinye ego, ahịa ọ bụla ha mepere emepe ga-edepụtaghachi na akaụntụ azụmaahịa gị, dị ka otu. Onye na-ere ahịa nnomi ga-emere gị mkpebi niile. Dị ka ha ga-ejikwa isi obodo ha, ị ga-ejide n'aka na onye ahịa ahụ na-ezere ịme mkpebi n'echeghị echiche.
Site n'ikwu nke a, e nwere ọtụtụ puku ndị ahịa ahịa nnomi ịhọrọ site na eToro, yabụ ịkwesịrị ịme ụfọdụ ọrụ ụlọ tupu ị banye.
Dị ka ndị dị otú a, na nkebi a nke ndu anyị na ndị ahịa 5 kacha mma na eToro, anyị chịkọtara usoro nke usoro achọrọ iji bido taa.
Kwụ na 1kwụ XNUMX: Copychọta Ezi Detuo ahịa
Nke mbụ, ịkwesịrị ikpebi ụdị onye ọchụnta ego nwere ahụmahụ ịchọrọ detuo ma mụta ihe site na. Cheta na ihe ọghọm ma ọ bụ uru ọ bụla na-abịara gị ga-ekpebisi ike site na nsonaazụ ahịa ha.
eToro nwere ihe karịrị nde mmadụ 12 na ndị na-etinye ego na ya, n'ihi ya, ọ bụ nhọrọ a ma ama maka ndị mmadụ na-achọ idetuo ahia. Ka anyị doo anya, ọ bụghị ndị a niile ga-enwe nkà ma ọ bụ ahụmịhe iji nyere gị aka i copomi ahịa ha.
N'oge gị nhọrọ usoro, gaba na ịkpachara anya na n'ụzọ kwesịrị ekwesị ahu nagide iyo ụlọ ọrụ. Nke a ga - echekwa gị oge dị ukwuu, ebe ọ bụ na enwere ọtụtụ nde ndị ahịa na oghere a. Ga ahụ ezigbo nhọrọ mgbe ị na-achọ ndị ahịa kacha mma na eToro ma ha bụ ndị a:
Oge - Nke a nwere ike ịbụ ihe ọ bụla site na ọnwa dị ugbu a ruo afọ 2 ikpeazụ.
Ọkwa - Nhọrọ n'etiti ndị a kwadoro na ndị na-ewu ewu.
Obodo - Ebe onye oru ntinye ego di (anyi echeghi na nke a bara uru nke mere na anyi na adụ ya ọdụ ịhapụ ya ka 'ebe nile').
Aha na Foto dị na - Nke a bụ naanị ma ị hụ foto profaịlụ ma ọ bụ aha ndị itinye ego. Ọzọkwa, dịtụ mkpa.
Ndị na-ede ihe - Chọta ndị na-etinye ego na ya trading trading ọnọdụ ọrụ
Ọrụ - Chọta ndị na-etinye ego na nkwụghachi ụgwọ na ọnwa bara uru
Egwu - Gbado anya na akara egwu, nbudata kwa ụbọchị, izu ụka kwa izu
Pọtụfoliyo - Chọpụta ndị na-etinye ego na-adabere na akụ na pọtụfoliyo ha na nha ahia ha.
Ọrụ - Tnzacha ya na-enye gị ohere ịchọta ndị mmadụ dabere na ọkwa olu na ọrụ azụmaahịa.
Ọ bụrụ n’ikpebie iji otu ma ọ bụ ọtụtụ nzacha, ịkwesịrị pịa bọtịnụ ‘tinye’ mgbe ị họrọchara. Ugbu a ị nwere ike kụrụ 'gaa' ma a ga-egosi gị ndepụta sara mbara nke ndị ahịa ahịa oyiri. Then ga - enwe ike ịbanye n'ime profaịlụ nke onye na - ere ihe maka nkọwa zuru ezu.
Dịka ị pụrụ ịhụ site na listi nzacha - nke dị mgbe ị na-achọ ndị ahịa kachasị mma na eToro, enwere ọtụtụ nhọrọ dị iche iche inyocha.
Na ọchụchọ gị maka ndị ahịa kachasị mma na eToro, ọtụtụ ndị na-etinye ego na-atụle metric a ka ọ bụrụ akara ngosi kachasị mkpa iji mụọ. N'ụzọ dị ukwuu, nke a bụ n'ihi na ọ na-egosipụta mbibi niile nke arụmọrụ onye ahịa ahụ kemgbe ịbanye na ikpo okwu.
N'ihe banyere arụmọrụ arụmọrụ anyị na-akwado ka ị payaa ntị nke ọma na oge gosipụtara ihe atụ.
Dịka ọmụmaatụ, onye ahịa nwere ike ịbụ 46% na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, nke dị mma. Mana, mgbe ị nyochachara nke ọma, ị nwere ike ịchọpụta na ọ dabere na azụmaahịa ọnwa ole na ole. Na mberede nke a nwere ike bụrụ ihe na-adịchaghị mma. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ bụ ihe mgbaàmà siri ike na ha na-achọ iji nnukwu ihe egwu na ahia.
Anyị ga-enye ndụmọdụ na-amasị ndị ahịa oyiri nwere ọ dịkarịa ala ọnwa 12 na-ahụ maka ikpo okwu. N'ime ime nke a, ị ga-enwe echiche ka mma banyere otu ha si arụ ọrụ.
AUM (Akụ ndị dị n'okpuru njikwa)
Na nkenke, AUM (Assets Under Management) bụ ngụkọta ndị ahịa bara uru dịka ị tinyere ego iji nwee ike i copyomi ọkachamara na-azụ ahịa. Mkpokọta uru ihe oyiri ahịa na ajụjụ esetịpụ na ha Pọtụfoliyo.
Anya isi na ị na-atụle oyiri ahia onwe gị, ị ga-nkewa dị ka a 'copier'. Mgbe ị na-achọ ndị ahịa kachasị mma na eToro, ị ga-ahụ ihe ndepụ na nọmba na-esote ma ọ bụ n'okpuru ya.
Enwere ike iji nke a tụnyere ọtụtụ ndị na-eso ụzọ mmadụ nwere na ntanetị Twitter na-egosi etu ewu ha. Ọ na-egosi gị n'ụzọ nkịtị mmadụ ole na-arụsi ọrụ ike na-edegharị onye ahịa ahụ.
Ebe onye ahia nwere ike iyi ihe na-adọrọ adọrọ karịa ka ọtụtụ ndị na-edegharị akwụkwọ, ọ bụghị ịbụ ihe niile na njedebe.
Nchịkọta ọnụ ọgụgụ a dị mma maka ịbanye n'ime ndị na-etinye ego na isi. Site n'ịmụ ọnụ ọgụgụ ndị a ị nwere ike inweta nghọta nke ihe onye na-etinye ego na-enwe mmasị ịzụta na ire, n'ụdị nke mmebi zuru oke.
Ga-enwetakwa ọnụ ọgụgụ dịka ọnụọgụ na uru sitere na azụmaahịa ọ bụla. Ekwesịrị ikwu na ọ bụkwa ụzọ dị mma nke ịhụ otu onye ahịa ahụ si arụ ọrụ mgbe ọ na-abanye ma na-apụ n'ọkwá. Nke a bụ nnukwu ụzọ iji gosipụta ọghọm onye ahịa ahụ nwere ike ịnwe.
Ọ bụrụ na e nwere ahịa dị iche iche ị na-achọ ịzụ ahịa - dịka cryptocurrency trading or ahia ahia, dịka ọmụmaatụ - ozi a ga-aba nnukwu uru ma a bịa n ’ikpebi ma onye ahia ọ bụ nke ịchọrọ idetuo.
Ọkara ahịa ahia
Ogologo ahia ndị ahịa ahụ bara uru mgbe niile. Iji chọta ndị a, pịa na ala nke profaịlụ nke ndị na-etinye ego. Ogologo ahia ahia nwere ike igosi gị ihe dị iche iche, dị ka nkezi ọnụọgụ ahịa a na-etinye kwa ụbọchị, izu ma ọ bụ ọnwa (dịka ọmụmaatụ).
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na onye na-achụ ego anaghị azụ ahịa kwa izu, ohere ọ bụla bụ atụmatụ ha bụ ogologo oge (zụta ma jide). N'ọnọdụ ndị ọzọ, onye na-azụ ahịa na-arụsi ọrụ ike nwere ike ịhọrọ ọnọdụ dị mkpirikpi.
Nke a bụ akara ọnye ọnye ahọpụtara ahọpụtara nke eToro kenyere. A na-emelite ọkwa ndị a mgbe niile. A na-atụle ọnụego ihe egwu (mita dị ize ndụ) n'etiti 1 na 10 - 1 ịbụ ọnụọgụ kachasị dị ala, yana 10 ịbụ nke kachasị elu.
Mee elu mee ala, ọ dị n'aka gị ọkwa ọkwa ị dị njikere ịnwe mgbe ị na-ahọrọ onye na-azụ ahịa ka ị toomie.
Nzọụkwụ abụọ: Obere ego itinye ego na ya
Ozugbo nhọrọ ahịrị gafere, ị nwere ike ịmalite iche echiche maka etu esi etinye ego itinye ego na ya. Ka anyị na-emetụ na mbụ, a ga-a 'na-atụ aro; opekempe ego nke ego achọrọ tupu ị nwee ike idetuo a ahia. Agbanyeghị, eToro na - enye gị ohere idetuo pọtụfoliyo site na $ 200 naanị - ọ bụrụhaala na ị ga - ezute ọnụ ụzọ a, ị nwere ike itinye obere ma ọ bụ ọtụtụ ihe masịrị gị.
Ozugbo ị kwadoro itinye ego na ajụjụ a, a ga-ebufe ego site na akaụntụ imebi gị wee banye na pọtụfoliyo onye ahịa ahụ (na-agbakwunye na AUM).
Nzọụkwụ nke atọ: Na-egosipụta Pọtụfoliyo
Nke a bụ ihe atụ dị mfe nke ihe na-eme pọtụfoliyo nke gị; post-ulo oru mbo.
Maka nzube nke ihe atụ a, anyị ga-ekwu na nke a bụ pọtụfoliyo onye ahịa ahụ:
£ 20,000 ruru uru nke mbak na RBS (20%)
£ 40,000 ruru nke mbak na Halifax (40%)
£ 40,000 ruru nke mbak na DHL (40%)
N'ebe a, pọtụfoliyo onye ahịa ahụ ruru £ 100,000, mana nke ahụ agaghị eme gị ihe ọ bụla. Naanị ihe dị gị mkpa bụ 'ịdị arọ', nke pụtara uru ọ bụla bara uru ga-agbakwunye na pọtụfoliyo ahụ.
N'ihi na pọtụfoliyo gị ga-adị ka-maka, nke a pụtara na ọ bụrụ na itinye ego £ 4,000 n'ime pọtụfoliyo oyiri ọ ga-adị ka nke a:
20% nke pọtụfoliyo azụmaahịa dị na mbak RBS, na-agwakọta £ 800
40% nke pọtụfoliyo azụmaahịa dị na Halifax Shares, na-achịkọta 1600 XNUMX
40% nke pọtụfoliyo azụmaahịa dị na DHL Shares, na-eweta £ 1600
O doro anya ịhụ ugbu a na pọtụfoliyo gị bụ enyo enyo ị họọrọ nke onye na-ere ahịa oyiri. Ma, na-ebu ibu dị ka ego ị tinyere.
Nzọụkwụ Anọ: Ntugharị na-aga n'ihu ahịa
Ebe ị na-adịghị mkpa ime ihe ọ bụla mgbe ị na-ahọrọ gị oyiri ahia, ị nwere nhọrọ nke na-e copomi ha trades na-aga n'ihu ndabere. Emechara, mbara uru iburu n'uche na ndị na-azụ ahịa na-azụ ma na-ere ebuka na mbak n'ihi gị ma ọ bụrụhaala na ị kpebiri.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na onye ahịa ahụ ga-ekpebi na mberede ịre ahịa niile na HSBC, yabụ, n'ezie, a na-erekwa mbak HSBC gị. Na ụzọ ndị ọzọ, ọ bụrụ na onye ahịa ahụ kpebiri ịzụta mbak na Microsoft, ị nwekwara òkè Microsoft.
Anyị kwesịkwara iburu n'uche na ndị ahịa ahịa na eToro na-etinye ego ọzọ n'ụzọ. Ihe kpatara nke a bụ ka ha nwee ike bulie pọtụfoliyo ha na akụ ndị ọzọ. Na nke a dịruru ná njọ, ị ga-ekpe na 2 nhọrọ.
Nhọrọ 1 - Tinye ego ọzọ
Otu ọ investụ na-emekarị na-eme mara ọkwa mgbe ha na-eme atụmatụ na-agbakwunye ọzọ ego iji nye gị oge zuru ezu iji mee nhazi.
Ma ị kpebiri ikpebi ma ọ bụ na ị chọghị, ekwesịrị ikwu na echiche ahụ bụ idetu ahia ahụ. Yabụ, ọ bụrụ n 'ịchọrọ n'ezie ihe onye na-achụ ego na-eme, mgbe ahụ ị ga-etinye ego ya (yana etu o kwesiri).
Nke a bụ ihe atụ dị ngwa banyere otu nke a nwere ike isi dị:
Ka anyị were ya na onye nwere ego nwere pọtụfoliyo na uru nke ,25,000 5,000 ma ha tinye £ 20 na nke ahụ. Nke a pụtara na onye na-etinye ego na-abawanye ọnọdụ XNUMX%.
Ugbu a ka anyị kwuo gị Pọtụfoliyo nwere uru nke £ 1,000, ị ga-achọ ịgbakwunye £ 200 (20% nke £ 1,000)
Nhọrọ 2 - Nchekwa onwe
Ọ bụrụ na ị kpebie na ịnweghị ike, ma ọ bụ na ịchọghị itinyekwu ego na pọtụfoliyo gị mgbe ahụ, a ga-edozi ọnọdụ gị maka gị na akpaghị aka.
Ndozigharị a pụtara na eToro agaghị enwe ihe ọ bụla ma ọ bụghị ire ụfọdụ nke mbak gị iji nwee ohere maka ịzụta ọhụrụ ahụ. Ka ga-eyingomi ọ investụ ahụ, mana ị ga-ebu ibu.
Nzọụkwụ ise: Inweta Ego site na Detuo Ahịa
Ọ bụrụ na ị nwere ahụmịhe ọ bụla na-enwerịta ego ma ọ bụ ETF mgbe ahụ, ị ​​ga-amarịrị otu esi enweta uru site na ahia ahia. Nke ahụ bụ ịsị, ị ga-enweta ego n'otu ụzọ ahụ dị ka ịme ya n'onwe gị site na ị nweta uru site na dividends na isi obodo.
Ọ bụrụ na ndị na-azụ ahịa azụmaahịa nke ị họọrọ ka nwere òkè na pọtụfoliyo ha, ị ga-enweta òkè gị na nke ahụ. A ga-akwụ gị ụgwọ ọrụ gị ozugbo ụlọ ọrụ ahụ kesara ịkwụ ụgwọ ahụ.
Nke a dị mma maka ịme ka ọtụtụ ihe nwee mmasị. Dịka ihe ọ bụla ọzọ na ịzụ ahịa azụmaahịa, ịkwụ ụgwọ niile ị ga-enweta ga-emetụta ego ị tinyere.
Isi Obodo Gains
Were ya na itinyela £ 10,000 n'ime pọtụfoliyo azụmaahịa, na n'ime pọtụfoliyo ahụ nwere oke mbak 50.
Ka ọ na-erule ngwụsị nke afọ mbụ, ọnụ ahịa zuru ezu site na 10%. Nke a pụtara na pọtụfoliyo azụmaahịa gị bara uru na ,11,000 1,000. Yabụ, ọ bụrụ na ịpụ na ọnọdụ gị, uru gị ga-eguzo na £ XNUMX.
N'ihi na eziokwu i nwere ike imeghari pọtụfoliyo gị na mgbe ị chọrọ, i copyomi trading bụ oké ụzọ itinye ego - n'agbanyeghị ihe ndụ na-achụpụ gị ụzọ.
Enwere ike inwe oge mgbe onye itinye ego ị na-edegharị akwụkwọ kpebiri ịzụta ebuka na ngalaba ị nweghị mmasị na ya. Na nke a, ịnwere ike iji aka gị pụọ n'ọnọdụ ahụ iji zere ikpughe na mpaghara ahụ.
Fọdụ ndị mmadụ na-achọ iji ihe karịrị otu oyiri ahia na oge. Nke a na - enye gị ohere ịgbasa n'ofe ọtụtụ ndị ahịa - na - ebelata mbenata gị ogologo oge n'akụkụ ụzọ.
Dịka anyị kwurula, ndị ahịa kacha mma na eToro abughi ndị nwere ọnụ ọgụgụ kachasị elu, yabụ na-amụ ọtụtụ ozi dịka ị nwere ike. Nakwa ezi nghọta nke otu esi azụ ahịa na-arụ ọrụ yana ihe egwu dị na ya, ihe ọmụma a ga - enyere gị aka ogologo oge.
Enwere m ike irite uru na azụmaahịa oyiri?
Azịza ya abụghị oji na ọcha. N'ezie, dị ka ịzụ ahịa ọdịnala enwere ike ịba uru. Agbanyeghị, enweghị nkwa 100%. N'okwu a, ị na-adabere n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọchụnta ego nke ịhọrọ.
Ọ nwere ụzọ ọ bụla iji belata ihe ize ndụ mgbe mbiet ahịa trading?
Otu ụzọ kachasị mma ị nwere ike isi belata ihe egwu ahụ mgbe azụmaahịa a na-ere ahịa bụ 'idetuo' ihe karịrị otu onye na-etinye ego. Otu okwu mara mma nke itinye nsen gị niile na nkata, ọ bụrụ na otu onye na-etinye ego nwere ntakịrị nsogbu, ị nwere ike ọ gaghị enwe mmetụta dị ukwuu. N'ezie, ọ dịghị ihe dị 100% enweghị nsogbu na ahia.
Gịnị bụ ego nke oyiri trading?
Ndị na-eri nke oyiri trading bụ nnọọ dabere na oyiri trading n'elu ikpo okwu ị na-eji. Dịka ọmụmaatụ, eToro anaghị ana ihe ọ bụla maka iji atụmatụ a.
Mgbe m tinye ego na pọtụfoliyo azụmaahịa otu, ego m ekpochiri?
Mba N'ikwu okwu n'ozuzu, ị ga-enwe ike ịpụ ọnọdụ azụmaahịa gị ọ bụla ịchọrọ, ma enwere ike ịme nke a na akụkụ, ma ọ bụ zuru ezu.
Enwere m ike ikwu ihe onye ahia m họọrọ na-etinye na ya?
Azịza dị mfe bụ mba. Ahịa ndị a zụtara ma rere bụ ndị ahịa kpebiri kpamkpam. Mgbe ị kwuchara nke ahụ, ịnwere ike ịchịkwa site na imechi ọnọdụ ma ọ bụrụ na ịnweghị mmasị na ngalaba ahụ, ma ọ bụ tinyekwuo ọnọdụ na pọtụfoliyo gị nke masịrị gị karịa.